Fibre Optic Inokurumidza Kubatanidza, Optical Fibre Inodzivirirwa Cable - Qingying
Fiber Optic Yekukurumidza Zvinobatanidza
Yedu yakakura uye inosarudza fiber optic portfolio yezvigadzirwa pamwe nehuvepo hwedu hwehunyanzvi hunovimbisa nekukurumidza mhinduro yevatengi, kugona kwehunyanzvi, uye kusimba kwekushanda kuburikidza chero nematambudziko anogona kupihwa kumabhizimusi madiki uye makuru.
Prefessional R & D Chikwata
Kuratidzwa kwemidziyo yekuyedza
Zirconia Sleeve Kuongorora
Kudhirowa 3D kwechigadzirwa
Kurumidza Kubatanidza Gungano
Adapter Kugadzira Saiti
Fiber Patch Cord Kugadzira Saiti
End Kumeso Kumisikidzwa
Kuisa & Kufungisisa Loss Muedzo
Yakagadzwa muna 2010, Dongguan Qingying Industrial Co, Ltd. (QY) ikambani ye fiber yakaomeswa iri mumaguta maviri, Dongguan uye Chongqing, muChina. Nenharaunda inopfuura zviuru gumi zvemamirimita, QY ikozvino ikambani ine kugona kwakabatana kweR & D, kugadzira, kutengesa uye kutengesa kwepasirese. QY ndeye ISO9001, ROHS, CE inosimbiswa kambani nemazana evatengi muEurope, America, Southeast Asia neAustralia. Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndeye fiber optic munda isingachinjike yekubatanidza (inokurumidza chinongedzo), adapta, chigamba tambo, yakadzivirirwa chigamba tambo, pigtail, PLC mahwanda, attenuator, uye zvimwe zvakawanda zvigadzirwa zveFTTH. Iine ruzivo rwemakore gumi nemaviri mu fiber optic indasitiri, QY inotenda kudzidza, kushandira pamwe, uye kugovana nevatengi ndiyo nzira yakanakisa yekukura nevatengi. Mumakore gumi ari kuuya, QY ichaita nehasha kugadzira zvigadzirwa zvitsva pamutengo wevatengi, uye nekuvandudza mhando yezviripo zvigadzirwa zvevatengi. Vese vashandi veQY vari kutarisira kushandira pamwe nekushandira pamwe nevatengi vefibre bhizinesi mune ramangwana.
Nhasi Qingying inozivikanwa zvakanaka mu fiber optic yekudyidzana indasitiri nevatengi vepasirese.
VATengi vedu Nhasi Qingying inonyatso kuzivikanwa mu fiber optic yekutaurirana indasitiri nevatengi vepasirese. Tsika yehutungamiriri muhunyanzvi, chigadzirwa mhando uye sevhisi yakagonesa kambani kukurumidza kukura Qingying ikozvino yaita kufambira mberi kwakasimba. Wle ramba uchienderera nekuenderana nechidanho chiri kukura uye kushandira kugona.
St Duplex Kubatanidza, Kurumidza Kubatanidza, Fiber Inokurumidza Kubatanidza, Munda Unogoneka Chinongedzo, Fiber Optic Connector Adapter, Fiber Optic Cable Zvibatanidza,